Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » Abantu baseKhanada bafuna ukuya phesheya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Uphando olutsha lufumanise ukuba abantu baseCanada balangazelela uhambo lwaphesheya, ngeepesenti ezingama-87 zokuxela ukhenketho olungumthombo wezona nkumbulo zibalulekileyo.
Malunga nesine kwabahlanu (iipesenti ezingama-78) zabantu baseCanada bathi izinto zibuyela esiqhelweni, ukhenketho lwamanye amazwe yenye yezinto abajonge phambili kuyo.
Ngaphezulu kwesiqingatha sabantu baseKhanada- iipesenti ezingama-55- bathi banomnqweno wokuhamba kumazwe aphesheya kunangaphambili.
Ngaphantsi kwekota yabantu baseCanada- iipesenti ezingama-24- bathe ngoku bacwangcisa uhambo lwamazwe aphesheya kwisithuba seenyanga ezintandathu ezizayo.
Iziphumo zophando lwamashishini lwamva nje olukhanyisa izimvo zabahambi bamazwe aphesheya baseCanada zakhutshwa namhlanje.
Iziphumo zafumanisa ukuba ngelixa uninzi lwabantu baseKhanada abahamba kumazwe aphesheya (iipesenti ezingama-58) bahlala belumkile malunga nokuhamba phesheya ngenxa yokunyuka kwe-Delta COVID-19 eyahlukileyo, kunye nesicwangciso esingaphantsi kwekota sokuhamba kwilizwe liphela kwiinyanga ezintandathu ezizayo, ngaphezulu Isibini kwisithathu (iipesenti ezingama-78) bathi ukhenketho lwamazwe aphesheya yenye yezona zinto bajonge phambili kuzo njengoko ubhubhane uzinza.
Uphando luye lwabonisa ukuba abahlali base Khanada mathidala ngakumbi ukuya ukuhamba kwamanye amazwe kunabamelwane babo basemazantsi, ngeepesenti ezingama-42 zabantu baseMelika abacwangcisa uhambo kumazwe aphesheya kwiinyanga ezintandathu ezizayo, xa kuthelekiswa neepesenti ezingama-24 kuphela zabantu baseCanada.
Ngenxa yokusikelwa umda kwezokhenketho, ngaphezulu kwesiqingatha (iipesenti ezingama-55) zabantu baseCanada ngoku baxela umnqweno onamandla wokubona umhlaba kunangaphambili.
Iimpendulo eziphezulu zezona zinto ziphosakeleyo malunga nokuhamba kwamazwe aphesheya kubandakanya ukubona izinto ezintsha (iipesenti ezingama-56), ukufumana imeko-bume entsha (iipesenti ezingama-53), ukunqunyulwa kunye nokuphumla (iipesenti ezingama-53), kunye nokufunda malunga neenkcubeko ezahlukeneyo (iipesenti ezingama-52).
Iziphumo eziphambili zoPhando:
Iipesenti ezingama-87 zabantu baseKhanada bayavuma ukuba ukhenketho lwamazwe aphesheya lubabonelele ngezona nkumbulo zibalulekileyo ebomini.